Cilmi-baaris loogu talagalay bogsashada
Beeraley ku taala xeebaha Riobamba, Ecuador waxay ururisaa quinoa.
Sidee bay u shaqeynayaan cilmi baadhista beeraha ee Farmer Solutions
Jane Maland Cady, Agaasimaha Guud Barnaamijka Caalamiga ah, ku biiray Tank Cuntada si ay u martigeliyaan webinar April 12, oo cinwaankoodu yahay "Cilmi-baaris loogu talagalay: Siday u shaqeynayaan beeraha cilmi-baarista beeraha ee xakamaynta deegaanka."
Wadahadalka ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga cunnada ee qaar ka mid ah meelaha ugu xun ee nafaqo darada adduunka ku baahsan iyadoo la isticmaalayo xikmad yar oo ku saabsan beeralayda maxaliga ah iyo awoodda aan qiyaasta lahayn ee xalka ecological.
"Inta badan waxaan dhisnaa buundooyin si ay is fahmaan midba midka kale, waxaana sii dheeraan doonaa cilmi baaris iyo xalal."
-JAND MALAND CADY, BARNAAMIJKA BARNAAMIJKA INTERNATIONAL
Tan iyo horraantii 1980s, Machadka McKnight Foundation wuxuu maalgeliyey cilmi-baaris beereedka agagaarka adduunka iyadoo ujeedadu tahay in beeraleyda ay ku caawiyaan qoysaskooda iyo bulshadooda. McKnight's Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada (CCRP) maalgalinta iskaashiga ka dhexeeya beeralayda yar yar, cilmi-baarayaasha maxaliga ah, iyo xirfadlayaasha horumarinta si ay u sahamiyaan xalalka nadaafada deegaanka, deegaanka deegaanka. CCRP waxay diiradda saareysaa taageerada laba iyo tobanka dal ee laba qaaradood oo ah saboolnimada iyo cunto-darradu ay abuurtay "dhibco gaajo oo gaajo leh."
Ka daawo Webinar